सबैभन्दा ठूलो आइपिओ आजबाट, कति कित्ता भर्दा ठिक? – Eps Sathi
January 14, 2021 1220
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले माघ २ गते शुक्रबारबाट ८ करोड कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्दैछ। ८ करोडमा यसै कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि ०.२ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६० हजार कित्ता छुट्याईएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० लाख कित्ता सेयर म्युचुअल फण्डहरुका लागि छुट्याइएको छ। कर्मचारी र म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएपछि बाँकी हुन आउने ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्तामा भने सर्वसाधारण नागरिकले आवेदन गर्न सक्नेछन्।
अहिले नेपालको सेयरबजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरु ह्वात्तै बढेका छन्। गत सोमबार एकैदिन करिब २३ हजारले डि-म्याट खाता खोलेको समाचारबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ। भरखर सेयरबजारमा छिरेका नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई आइपिओबाट लगानीको सुरुवात गर्नु उत्तम हुन्छ। जोखिम कम हुने भएकाले विस्तारै बुझ्दै गएपछि दोश्रो बजारबाट पनि खरिद बिक्रि गर्दा उत्तम हुने देखिन्छ।
अहिले आइपिओ भर्नेहरुको संख्या धेरै नै बढेको छ। केहि दिन अघि खुलेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आइपिओमा १२ लाख ५१ हजार ९३८ जनाले आवेदन गरेका थिए। त्यो भन्दा अगाडि खुलेको प्रभु लाईफ इन्स्योरन्स लिमिटेडको आइपिओमा १० लाख ८२ हजारले भरेका थिए।
यि तथ्याङ्कहरुबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको आइपिओमा पनि यो भन्दा बढिको आवेदन पर्न सक्छ। त्यसैले ७० देखि ८० कित्तासम्म सबैले पाउन सक्छन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले पैसा भएसम्म ९० वा १०० कित्तासम्म भर्दा उचित देखिन्छ।
Posted in मनोरंजन, राशिफल, रोचक, समाचार, सेयर बजार, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prevके हो डि-म्याट खाता? कसरी खोल्ने?
Nextकोरियामा पूर्व राष्ट्रपतिलाई २० बर्ष जेल